यस्तो बन्ने छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला | Hamro Khelkud
यस्तो बन्ने छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– विनाशकारी भूकम्पपछि चारवटा एकिकृत बस्ती निर्माण गरेको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको घोषणा गरेको छ । फाउन्डेसनले भरतपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सिलान्यासको दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको घोषणा गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशला निर्माणको लागि बुधबार फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरबीच जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले हस्ताक्षर गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको भरतपुर– १६ को यो जग्गा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले भोगचलन गरिरहेको थियो । क्रिकेट रंगशाला बनाउने भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भरपुर महानगरपालिकाको माध्यमबाट फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराएको हो ।
२० विगाह ८ कठ्ठा क्षेत्रफलमा बन्ने रंगशालाको नाम गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला हुनेछ । चितवनमा बन्ने क्रिकेट रंगशाला कमलको फुल आकारको हुने बताइएको । यसमा २५ हजार दर्शक अट्नेछन् । बहुउपयोगी हुने यो रंगशालाभित्र त्रिकेट प्रशिक्षण मैदान, फुटबल, भलिबल बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, स्वीमिङपुल र फिटनेस सेन्टरसम्म रहनेछ ।
रंगशालामा बाहिरी भागमा नेपाल चिनाउने सम्पदाहरु समावेश गरिनेछ । जसमा एक सिंगे गैंडा, हात्ती, पाटेबाघ लगायत जनावरहरुको धातुको मुर्ति रहनेछन् । त्यस्तै नेपालका पर्यटकीय स्थलहरुलाई चिनाउने सामग्रीहरु पनि राखिनेछन् । क्रिकेट खेलाडीहरु उत्पादन गर्न एकेडेमी पनि रंगशालाभित्र रहनेछ । समग्रमा रंगशालालाई स्पोट्र्स हबका रुपमा विकास गर्ने बताइएको छ ।
‘रंगशालाको थ्रीडी डिजाइन तयार भएको छ । अब गुरुयोजना तयार पारिनेछ, जसका लागि ६ महिना लाग्नेछ । त्यसपछि रंगशालाको शिलान्यास गरिनेछ । शिलन्यासकै दिन हामी दुई वर्षभत्र सक्ने वाचाका साथ कामलाई अघि बढाउनेछौं,’ फाउन्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलले भने, ‘रंगशाला करिब २५ हजार दर्शक क्षमताको हुनेछ । ‘यो रंगशाला नेपाली मौलिकताले भरिपूर्ण र विश्वमै नमूना हुनेछ । हामी आईसीसीका सम्पूर्ण मापदण्डहरु पूरा गरेर बनाउने छौं । २ वर्षभित्र रंगशाला निर्माण गरी महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नेछौं ।
उनले रंगशालाको आर्थिक दायित्व फाउन्डेसनको काँधमा रहेको र जनसहयोगबाटै सम्पूर्ण रकम जुट्ने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले यस्तो पवित्र कार्यमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीले दिल खोलेर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको समेत बताए ।
रंगशाला निर्माणको लागत ३ अर्ब अनुमान गरिएको छ । देश–विदेशका नेपालीहरुबाट प्राप्त हुने स्वैच्छिक सहयोगबाट आर्थिक स्रोत जुटाइने फाउन्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलले बताएका छन् । बुधबारै झन्डै साढे ४ करोड रुपैया संकलन भएको थियो । उनले यसअघि जनसहयोगबाटै भूकम्पपीडित, बाढी पिडित र मुसहरहरुका लागि नमूना वस्ती बनाएका थिए ।
नेपालले एक दिवसीय अन्र्ताष्ट्रिय मान्यता पाएपछि गत चैतमा नै धुर्मुसले फेसबुकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गन घोषणा गरेका थिए । उनको टिमले उपयुक्त स्थानको खोजीमा देशका विभिन्न स्थानमा स्थलगत भ्रमण गरेपनि भरतपुर महानगरले फाउन्डेसनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । पटक–पटक अवलोकनपछि चितवनमा रंगशाला बनाउन फाउन्डेसन तयार भएका थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ कामको थालनी गर्ने संकल्प गरेको भन्दै धुर्मुस सुन्तलीको प्रशंसा गरेका छन् । ‘फाउन्डेसनले भरतपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने घोषणा गरेको छ । यो राम्रो कामको थालनी हो । बजेट निकै ठूलो छ । पैसा छैन तै पनि आँट ग¥यो । आँट गरेर महानगरपालिकासँग सम्झौता नै ग¥यो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘धुर्मुस सुन्तलीले रंगशाला बनाउँछन् । अरुले केही नगर्ने ? अरुले रंगशाला नबनाए पनि अरु केही त गरौं । गरे किन हुँदैन ? एउटा मान्छे खोजिरहेछु भन्दा ‘ए धर्मुस सुन्तली भेटियो । अब पुग्यो त ? एउटा रंगशालाले मात्र त पुग्दैन ।’
उनले सहयोग गर्छु भन्नेहरुलाई रकममै बाचाअनुसार रकम उपलब्ध गराउन आग्रहसमेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नोतर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिए । नेकपाका अध्यक्ष एवंम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फाउन्डेसनको पहललाई धन्यवाद दिएका थिए । उनले फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरको रंगशाला निर्माणलाई लिएर देखिएको उत्साह प्रेरणादायी भएको बताएका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले नगरपालिकाको श्रोतले मात्र रंगशाला निर्माण सम्भव नभएकाले यसको पहल लिने फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिइन् । उनले रंगशाला निर्माणपछि पहिलो खेल भारत र पाकिस्तानबीच गराउने प्रयास गर्ने समेत बताइकी थिइन् ।
कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले फाउन्डेसनको कामले कलाकारको इज्जत बढेको बताए । उनले सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको उल्लेख गर्दै कट्टेल दम्पतीले भने एकपछि अर्को स्तरीय काम गरेको बताए । उनले कट्टेल दम्पतीलाई स्याबासी दिदै भने, म पुलिस आर्मी त हैन तर तपाईहरुको कामका लागि सल्युट गर्छु । उनले आर्थिक अनियमितताबाट भने जोगिन सल्लाह दिए ।